Ao ambadiky ny tanana
vatana iray manontolo
Soroka amin'ny soroka
Mikasika ny tendany
Ao ambadiky ny sofina
Miverina ny antsasa-manila
Eo ambanin'ny tratrany
Tany ambanin'ny tongotra
Dady aty aoriana
Tongotra tsara tarehy
Toerana tsy miankina
Feno vatana iray
Volamena ao afovoany
Tsara tarehy kely
Zazakely baolina kitra
Ny ambo misy sivy
lava crane fotsy
Fihenana avo roa heny
Ranom-boalambo misy mena
Bibidia ao ambanin'ny tany
Vorona sy voninkazo
Saka tsara tarehy
Lalao dolara kely
lolo kely kely
Saka mainty saka
Zavamaniry bitika kely
Voninkazo vatana Anglisy
Famantarana tsy manam-petra
tafika mahery fo
Mandritra ny dragona amin'ny soroka
Aiza ny ranomasina?
Afo tsy manam-paharoa
Miady amin'i Buddha
Impermanence mainty sy fotsy
Pluto tsy azo esorina
Anjely manana elatra enina
Mpanjaka tsy mihetsika
Ny mason'i Horus
Tanana tanana vavaka
Ny maso tsy hita maso
Ny molotra mena
Mena ny fo
Crane taratasy an'arivony
Ny tontolon'ny rano ambanin'ny tany
Bow sy arrow
Lanitra feno kintana
Rano mitete rano
sary sokitra vato
Voninkazo vanila kely
ny masoandro kely
Moon sy masoandro
Eoropa sy Amerika
Ny sary sokitra hena
Ny tsirony mavesatra
Volafotsy eoropeana sy amerikana
Lehilahy mavo kelikely
Satroka mavo kely
Mandefasa kintana lehibe iray
Kanto tsara tarehy
Ramby roa ambin'ny folo
Maso ny maso rehetra
malefaka sy tsara tarehy
Ny fomba fanaovana tombokavatsa
Lazao fa misy olona matavy manana tombokavatsa amin'ny teny.
Miankina amin'ny habetsaky ny lanjanao,ohatrinona izay very,haingana fa very io ianao,ary aiza ny tatoazy.Raha very ~ 50 kilao na latsaka,noho izy mety tsy hivadika,fa raha very manodidina ny 100 kilao,avy eo misy vintana dia ho somary manahirana iha......
Inona ny tattoo iray izay tsy mety omena ny mpanakanto tatoazy?
Rehefa nahita ny tatoazy farany aho dia nangataka ny tokony ho 3cm eo ho eo aho fa nandà ilay mpanakanto.
Nilaza izy fa tsy ho mandeha tsara araka izany habe izany.Rehefa teo am-baravarankely sy ny sisiny ambany aho dia tsy olana be ho ahy ny habe......
Andininy inona no marina \_"Nahita ny tatatra teo an-damosinao aho\_" sa \_"hitako ny tatoazy teo an-damosinao\_"?
\_"Eo amin'ny lamosinao\_" dia misy mitovy amin'ny olona miambina anao toa ny nitodihako.
Raha miresaka momba ny fanoratana na sary izay voapetaka eo an-damosinao toy ny tatoazy ianao,
dia eo amin'ny lamosinao ny tena marina.
Hankany amin'ny fivarotana iray ve ny olona sasany satria misy parlor amin'ny tatoazy amin'ilay plaza mitovy (mieritreritra ny hangalatra ny olona mandehandeha any amin'ny fivarotana tattoo)?
Indraindray.Tsy takatry ny olona foana fa ny dokoterany,mpisolovava,sns.,koa misy tombokavatsa eo ambanin'ny akanjony sy ny akanjo matevina.
Talohan'izay aho dia niasa ho fandraisana mpizara ho an'ny studio ballet izay misy toeram-pivarotana fivar......
Fa maninona aho tsy tokony hahazo tatoazy any am-ponja?
Tsy te-hanao tatoazy akory aho fa hoy hatrany ny tenako hoe: \_"Mieritreritra aho fa raha sanatria ka nahazo ny iray aho dia ho any am-ponja,satria amin'izay fotoana izay dia misy mikarakara?\_"
Ny ampahany adala no nolazaiko hatrizay talohan'ny nah......
Ahoana no fomba hisafidiananao zavatra amin'ny tatoazy, dia mety mahazo fotoana kely hanenenana ny fanaovana tatoazy?
Tsy ny rehetra no manenina amin'ny tatoazy ananany.Tsy manenina ny momba ahy aho.Na izany aza dia nanokana fotoana handinihana tsara ny fizarana tsirairay aho ary natoky ny mpanakanto aho ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fizotran'izany.
Inona no tsy tokony hihinana aorian'ny tatoazy?
Ranom-boankazo sy sodas ary vonona;
Sakafo voa,toy ny tsipika,ny mofomamy sy ny sakafo hanina hafa,sakafo haingana; ny henan-kisoa sy hena natsangana toy ny saosisy sy ny fofona,lambo sira,Bacon,mozzarella sy salami;
Tena marina ve ny tatoazy Kim Taehyung?
Um no.Tsy tena misy izany.
Navoaka tamin'ny wevers izy andro vitsivitsy lasa izay.Afaka mahita n......
Fantatro maharary ny tatoazy,fa ahoana ny fomba hamaritanao ny fahatsapana?Moa ve mahatahotra ny sandriny?Fanavaozana: Tsy naharary ny tatoazy.Misaotra ry zalahy.
Mandritra ny tatoazy rehetra,nefa miovaova amin'ny tsy fahazoana ny olona sy ny toerana misy azy ireo.
Fitsipika ankapobeny amin'ny ankiby:
Raha mahatsiaro tsara izy dia afaka mahatsapa tena ratsy.
Ny faritra \_"nofo\_" dia mandratra kely noho......
Heverinao ve fa ratsy ny tombokavon'ny tanany Jungkook?
No.Midika ho azy ny tombokavatsa napetraka eo amin'ny rantsantanany havanana?Betsaka ny dikany.Toy ny ohatra:
ARMY \_u003d Izahay
A tsy misy tsipika afovoany dia toa mihemotra V ......
Tsy manaja olona amerikanina ve ny maka tombokavom-pirenena Hawaii?
Tsy teratany Native aho fa efa ela aho efa nipetraka tany Hawai'i mba hamaliana ny fanontanianao somary feno kokoa noho ny valiny hafa novakiako avy amin'ny olona izay mazava ho azy fa tsy olona eto an-toerana..
Eny,I Hawaii no fanjakana any Etazo......
Inona no maharary kokoa, ny tatoazy na ny fitevehana?
Arakaraka.Ny tatoazy maharary noho ny fahazoana peratra,amin'ny zavatra niainako.Saingy ny voatrobaka voan'ny tratrako dia naharary NY FANAO noho ny tatoazy! ,henjana mandrakizay sy mikapoka amin'ny lobakao izy na dia voapoka aza.
Aza manontany ah......